Imigca yeGlove Production service line
Izixhobo zokwenza isikhuseli semveliso yeglavu sisixhobo esikhulu sobungakanani. Kukho iimfuno ezithile kubungakanani bendawo yokusebenzela kunye nemimandla enxulumene noko. Iqela loyilo likaChuangmei liya kubonelela ngokucwangciswa kwemigca yokuhambisa iiglavu zobungcali kunye nokusasaza ngokusekwe kwiimfuno zabathengi kunye nobungakanani bezityalo. Abaxhasi banokuqhubeka ngokufanelekileyo. Ukwakhiwa kwendawo yokusebenzela.
1) Umthengi ubonelela ngobude, ububanzi, kunye nobude obusebenzayo besityalo okanye imizobo yoyilo, imifanekiso, iividiyo, njl., Kwaye iqela laseChuangmei libonelela ngemilinganiselo efanelekileyo yokuvelisa / iingcebiso ngomthamo kunye nobume bezityalo ezisemgangathweni ngokusekwe kolu lwazi;
2) Ukuba umthengi akanaso isityalo esele sikhona, banokubonelela ngeethagethi yemfuno yesakhono semveliso. Iqela laseChuangmei liza kubonelela ngeengcebiso malunga nokusasazwa kwemveliso yesayensi kunye nobungcali ngokusekwe kwimfuno yamandla emveliso, imephu yokuhambisa izityalo esemgangathweni, kwaye umthengi unokufumana okanye akhe isityalo esitsha ngokusekwe kwimephu yokuhambisa kunye nobungakanani.
Emva kokuba ikhontrakthi iqale ukusebenza, iqela laseChuangmei liza kudibanisa uphando lwendawo kunye nolwazi olunikezwe ngumthengi ukubonelela ngemizobo yokuhambisa izityalo ngaphakathi kweentsuku ezisi-7 zomsebenzi, kubandakanya imizobo yokuhambisa indawo, imizobo yolungelelwaniso lweendawo zokufikelela kwimibhobho yeesekethe / iindlela zamanzi / igesi yendalo / imijelo yogutyulo. Abathengi banokwakha izixhobo ezisisiseko sesityalo ngokwemizobo.